केही मान्छे निद्रामा किन बर्बराउँछन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
केही मान्छे निद्रामा किन बर्बराउँछन् ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७८ 35
कोही कोही मानिसको निद्रामा बोल्ने बानी हुन्छ । अंग्रेजीमा यसलाई सोम्नीलोकी भनिन्छ । यसरी निद्रामा बर्बराउने मान्छेका कुरा सुन्न मजा हुन्छ । मध्यरातमा हामीमध्येका केही के के बर्बराउँछौं । ती अरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ ।
निद्रामा बर्बराउने मान्छेले आफ्ना सबै रहस्य खोल्छन् भनी सोच्नु मूर्खता भएको उनको भनाइ छ । तर यसले पर्याप्त निद्रा नपुगेको संकेत चाहिँ दिन्छ । राष्ट्रिय निद्रा प्रतिष्ठानले तनाव, अवसाद, दिनको थकान, रक्सी सेवन र ज्वरोका कारण पनि निद्रामा बोल्ने बानी लाग्ने बताएको छ । त्यसैले तपाईं निद्रामा बर्बराउनुहुन्छ भने नआत्तिनुस्, तपाईंका रहस्य सुरक्षित नै छन् । बरू यसबाट छुटकारा चाहनुहुन्छ भने रिल्याक्स गर्नुस् र राम्रो निद्रा पार्नुस् । gnewsnepal.com बाट सभार